कर्णाली प्रदेश Archives – Bageshwori Post
आज नवरात्रको पाँचौं दिनमा नवुदर्गा भवानीको स्कन्दमाता पूजा
नेपालगन्ज.२८ असोज । आज नवरात्रको पाँचौं दिनमा नवुदर्गा भवानीको स्कन्दमाता स्वरुपको पूजाआराधना गरिन्छ । भगवान स्कन्द ‘कुमार कार्तिकेय’ को नामबाट पनि चिनिन्छन् । उनी देवासुर संग्राममा देवताका सेनापतिका रुपमा चित्रित छन् । यिनै स्कन्द भगवानकी आमाका रुपमा उनलाई स्कन्दमाता भनिएको छ । नवरात्रको पाँचौं दिन स्कन्दमाताको पूजा गरिन्छ । स्कन्दमाताको वाहन सिंह हो भने उनलाई भगवान शिवकी पत्नीका रुपमा लिइन्छ ।उनलाई पद्मासना देवी पनि भनिन्छ ।हिन्दूहरुकी देवी शक्तिरुपा नवदुर्गाका नौवटा स्वरुप...
दशैको मुखमा बाढीपीडित भन्छन्– खर्च पनि छैन, हर्ष पनि छैन: बाढी पीडित
सुर्खेत,दिपकजंग शाही,२५ असोज। दश वर्षका विवेक नेपाली सडकबाट डेढ सय मिटर तलको खोलाबाट ढुंगा बोकेर ल्याउँछन्। उनकी ६१ वर्षीया हजुरआमा देवीसरा ती ढुंगा टुक्र्याएर गिटी बनाउँछिन्। दस वर्षका विवेक नेपाली सडकबाट डेढ सय मिटर तलको खोलाबाट ढुंगा बोकेर ल्याउँछन्। उनकी ६१ वर्षीया हजुरआमा देवीसरा ती ढुंगा टुक्र्याएर गिटी बनाउँछिन्।परिवारको दैनिक गुजारा यही हो। सुर्खेत, बराहताल गाउँपालिका–२, गिरीघाटस्थित बाढीपिडित शिविरमा बस्ने विवेक कक्षा ३ मा पढ्छन्। बिहानको समय विवेककी आमा भान्साको काममा व्यस्त हुन्छिन्। त्यही...
दु्रत गतिमा भेरी–बबईको सुरुङ निर्माण
सुर्खेत,२४ असोज। भेरी –बबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ निर्माण लक्ष्य अगावै सम्पन्न हुने भएको छ । नेपालमा पहिलो पटक प्रयोगमा ल्याइएको टनेल बोरिङ मेशिन (टिबिएम) ले ११ महीनामा भेरी बबईको ८.३ किलोमिटर सुरुङ निर्माण सम्पन्न गरेको छ । भेरीको पानीलाई १२ किमी लामो सुरुङमार्फत बबईमा खसालेर विद्युत उत्पादन गर्ने र बाँके–बर्दियामा सिंचाइ सुविधा पु¥याउने उद्देश्यले सरकारले राष्ट्रिय गौरवका रुपमा आयोजना अघि बढाएको हो । आयोजनाले आगामी फागुनसम्म बाँकी चार किमी...
बिजया दशमी शुरू, आज पहिलो दिन घटस्थापना
नेपालगन्ज,२४ असोज। नेपालीहरुको महान चाड बडा दशैं सुरु भएको छ । दशैंको पहिलो दिन आज घटस्थापना हो । दूर्गा भवानीको कृपा तथा आशिर्वाद प्राप्त गर्नका लागि विजयादशमी मनाउने शास्त्रीय विधान छ । शुद्ध माटो तथा गोबरले घर शुद्ध बनाएर शास्त्रीय विधि अनुसार शुभ मुहूर्तमा घडा स्थापना गरी घडाको नजिक सप्तधान्य जमरा बीजारोपण गरी नौ दिनसम्म विभिन्न नामले शक्तिको पूजा आराधना गरिन्छ । त्यस पश्चात् प्रसाद स्वरूप दशमीको दिन लगाउने...
नेविसंघमा अब ३२ वर्षभन्दा बढि उमेरका व्यक्ति नेता हुन नपाउने
काठमाडौं,२२ असोज । नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघमा उमेरहद तोकिएको छ । राति अबेरसम्म बसेको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले नेविसंघमा लामो समयदेखि देखिएको विवाद हल गर्न उमेरहद तोक्ने प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको हो । समितिका संयोजकसमेत रहेका डा। प्रकाशशरण महतले यो प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा पेस गरेका थिए । तर नेता रामचन्द्र पौडेल निकट नेताहरुले यसको तीव्र विरोध गरेपछि राति अबेरसम्म बैठक लम्बिएको थियो । बैठकले १२ औं महाधिवेशन...
दैलेखको भवानीलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर तीन पटक भूकम्पको धक्का
सुर्खेत,१९ असोज। दैलेखमा शुक्रवार दिउँसो लगातार तीन पटक भूकम्प गएको छ । नारायण नगरपालिका वडा नम्बर १० भवानीलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर तीन पटक भूकम्प गएको हो। दिउँसो ११ बजेर ५५ मिनेट जाँदा पहिलो, १२ बजेर ५३ मिनेटमा दोस्रो र १ बजे तेस्रोपटक भूकम्प गएको भूकम्प मापन केन्द्र सुर्खेतले जनाएको छ । दैलेखको भवानी भन्ने स्थानलाई केन्द्रविन्दु बनाएर ४।० रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको भूकम्प मापन केन्द्र सुर्खेतका प्रमुख दीपक बस्नेतले जानकारी दिए...
दशैं मनाउन भारतबाट घर फर्किनेहरुको जमुनाहामा घुइँचो
नेपालगन्ज,१८ असोज। दशै मनाउन घर फर्किने नेपालीहरुको नेपालगञ्जको जमुनाहा सीमानाकामा घुइँचो लागेको छ । कामका लागि भारत गएका नेपाली दशैं मनाउन घर फर्किन थालेका हुन् । इलाका प्रहरी कार्यालय जमुनाहाका इन्चार्ज प्रहरी नायब निरिक्षक शिवकुमार ओलीले अहिले दैनिक ७ सयको हाराहारीमा नेपालीहरु दशैं मनाउन घर फर्किने गरेको बताउनुभयो । पछिल्लो समय नेपाल फर्किनेको संख्या तेब्बरले बृद्धि भएको ओलीले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश ५, ७ र कर्णाली प्रदेशका पहाडी जिल्लाका मानिसहरु...
सातै प्रदेशमा यात्रु सहायता कक्ष
काठमाडौँ, १७ असोज । ट्राफिक प्रहरीले चाडबाडको समयमा सुरक्षित रुपमा गन्तव्यस्थलसम्म पुग्ने वातावरण बनाउन सातै प्रदेशमा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना गर्न लागेको छ । नेपालीको महान् पर्व दशैँ नजिकिएसँगै ट्राफिक प्रहरीले सातै प्रदेशका सवारीसाधन धेरै आवतजावत गर्ने विभिन्न जिल्लाका स्थानमा यात्रु त्यस्तो सहायता कक्ष राख्न लागेको हो । प्रहरी प्रधान कार्यालय ट्राफिक निर्देशनालयका प्रहरी उपरीक्षक जनक भट्टराई चाडबाडमा यात्रुलाई सहज, सुरक्षित र व्यस्थित तवरले गन्तव्यसम्म पु¥याउन विशेष अभियान सञ्चालन गर्न...
ठूली भेरी नदीमा चार दिन अगाडि फेला परेको एक महिलाको शवको अझैसम्म पहिचान भएन्
रुकुम पश्चिम, १५ असोज । रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिका– ११ स्थित ठूली भेरी नदीमा चार दिन अगाडि फेला परेको एक महिलाको शवको अझैसम्म पहिचान हुनसकेको छैन् । वडा नं ११ को रिठा भन्ने ठाउँमा गत असोज १२ गते अन्दाजी ३५-३६ वर्षकी महिलाको शव फेला परे पनि हालसम्म पहिचान हुन नसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । दुबै हात ग्याबिङ तारले बाँधेको र अर्धनग्न अवस्थामा शव फेला परेको उक्त कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक...
जाजरकोटका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा औषधि नहुँदा स्थानीयवासी मर्कामा
जाजरकोट, १४ असोज । जाजरकोटका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा औषधि नहुँदा स्थानीयवासी हैरान भएका छन् । सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा औषधि नपाउँदा निजी मेडिकलमा महँगोमा औषधि किन्न बाध्य भएको स्थानीयको गुनासो रहेको छ । जिल्लाका दुर्गम क्षेत्रमा रहेका स्वास्थ्य संस्थादेखि सुगममा रहेका स्वास्थ्य संस्थामा औषधिको अभाव हुँदा सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दल्ली र लिम्सा, स्वास्थ्य चौकी कुदु, सिलिङ्गीचौर, स्वास्थ्य केन्द्र पुन्मा, दशेरालगायत दुई दर्जन ठाउँमा रहेका स्वास्थ्य संस्थामा...
डिएसपी र सहसचिव सगै दर्जन अधिकृतको दसैँ पनि अख्तियारको थुनामा
काठमाण्डौ,३० असोज।अख्तियारको हिरासतमा दसैँ मनाउनेहरूमा डिएसपीदेखि सहसचिवसम्म छन् । उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पोखराका सहन्यायाधिवक्ता...
सरयू मिडियाको आयोजनामा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम सम्पन्न
नेपालगन्ज, २९ असोज।सरयू मिडियाको आयोजनामा सोमबार बिजया दशमीको अवसरमा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम नेपालगंजम सम्पन्न भएको छ।...
आज दुर्गा भवानीको छैटौँ शक्ति स्वरुप कात्यायनी देवीको पूजा गरिँदै
नेपालगन्ज, २९ असोज । नवरात्रको छैटौँ दिन आज दुर्गा भवानीको छैटौँ शक्ति स्वरुप कात्यायनी देवीको पूजा...
नेपालगन्जका मिठाई पसलमा अनुगमन, ४० लीटर दुध नष्ट
© 2015-2018 Sarayu Media Pvt. Ltd. , Nepalgunj, Banke सर्वाधिकार सुरक्षित | प्रेस काउन्सिल नेपाल दर्ता नं.: 3829/074-075